GOBOLKA TOMSK AYAA SOO SAARI DOONA JIISKA SWISS - MAQAALLO
Gobolka Tomsk ayaa soo saari doona jiiska Swiss
Tuulada Yagodnoe, oo ku taal gobolka Tomsk, ayaa dhawaan noqon doonta xarunta Ruushka ee soo saarista jiiska Gruyere Swiss. Si fikraddan loo helo nolosha, abuurayaashu waxay u baahan doonaan 30 milyan oo doolar.
Soo saarka kiishashku wuxuu bilaabmaa Maajo. Run, macaamiisha waxay awoodi doonaan inay tijaabiyaan jiiska ugu horeeya sannadka 2020 - ka dib markii ay soo baxday. Waxaa la sheegay in jiiska Gruyere laga sameeyay caanaha Alpine ee la soo doortay, oo muddo dheerna ripens iyo, guud ahaan, waa alaab qiimo jaban. Isla mar ahaantaana, badeecadu waxay leedahay dhadhan gaar ah iyo dabacsanaan.